"Zealandia"Qaarad cusub oo qarsoon oo laga heley biyaha Badweynta Pacific ga hoostooda - Horn Future
(Reuters)-Seynisyahanno ayaa sheegay in la helay qaarad u dhiganta saddex-meelood laba meelood Australia taas oo ku hoos jirta biyaha Badweynta Pacific ga ee koonfurta-galbeed.
Qaaraddan ayaa dhul ahaan lagu qiyaasay ku dhawaad 4.5 malyuun oo kilomitir oo isku soo wareeg ah taas oo 94% kamid ah ay biyaha hoostooda ku jirto oo aynan dusha kasoo muuqan waxa aanan ahayn keliya labo dhibcood oo kala ah New Zealand iyo New Kaledonia.
Nick Mortimer oo ah xeel-dheere ka howlgala machadka( Institute of Geological and nuclear Sciences) ee New Zealand ayaa waxa uu yidhi, “Waa arrin niyad jab nagu ah hadii aan nahay geologist sababta oo ah biyaha badda ee halkaas…,haddii aan awoodi kari lahayn in biyaha badda aan ka jiidno qaaraddani waxa ay u muuqan lahayd qof walba, waxa jira silsilado buuro ah iyo qaaraddan weyn oo qolofteedu ay kasoo muuqata badda.”
Mortimer oo hogaaminaya kooxda cilmi-baadhayaal ah oo daraasadan cinwaan uga dhigay “Zeelandia: qaaradda ka qarsoon dhulka,” taas oo tilmaameeysa in daahfurkan cusub uu muujinayo wixii saynisyahanadu ay hore u tuhmayeen in muddo ah.
Haddii culumadani ay qiraan daahfurkan cusub waxa lagama maarmaan ah in dadka wax xardha ama sawira ay ku dari doonaan muuqaalka khariidada qaaraddan siddeedaad iyo Atlas.
Waxaa la rumeysan yahay in “Zealandia” ay ka go’day Australia ku dhawaad 80 malyuun oo sano ka hor, kadibna ay ku degtay biyaha hoostooda iyadoo ka go’day qaaraddi weynayd ee loo yaqaanay Gondwana Land.
« “Zealandia”, un septième continent de 5 millions de km2	» Sheekh Cumar Cabdul Raxmaan oo ku geeriyooday xabsi kuyaala dalka Maraykanka